Puntland oo markale sheegtay in Airporka Bosaso laami la saarayso - Horseed Media
Puntland oo markale sheegtay in Airporka Bosaso laami la saarayso November 6, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleWaxaa maanta magaalada Bosaso ee xarunta gobalka Bari lagu casumay saxaafadda inay ka qeyb galaan shir jaraa’iid oo ay Airporka Bander Qasim ku qabteen xubno kamid ah maamulka Gobalka, degmada iyo Wasaaradda Garoomada iyo duulista ee Puntland.
Shirkan jaraa’iid oo ay ka hadleen Wasiir kuxigeenka W.Garomada iyo Duulista Hawada, Agaasimaha Wasaaradaasi, Guddoomiyaha gobalka Bari iyo Duqa magaalada Bosaaso, ayaa lagu sheegay in dowlada Puntland ay hada bilaabeyso inay dhisto wadada ay diyaaradaha kusoo degaan kana duulaan (Runwayga) Airporka Bosaso.
Kulankan ayaa kusoo beegamay xili Dowlada Puntland si weyn loogu dhaliilayey in aysan dhameystirin Airporka Bosaso oo ah kan ugu weyn deegaanada Puntland, xiligana aysan kusoo degin diyaarado badan kadib markii Diyaaradihii Rakaabka qaadi jiray ee shirkadaha u wareegeen intooda badan Airporka Berbera.
Kulankii maanta ayaa mas’uuliyiinta ka hadlay goobta sheegeen inay hada ay dhagax dhigeen dhismaha Runwayga. Balse maaha markii ugu horeysay oo Runwayga la dhismihiisa la dhagax dhigo, waana markii 3aad dowlada Puntland ay sheegto inay dhiseyso Runwayga.
Madaxweyne Cadde Muuse oo booqanaya Terminalka Bosaso kadib markii dhismihiisa la bilaabey bilowgii 2005
Airporka Bosaso oo dhismihiisa la bilaabay sanadkii 2005tii ayaa waxaa dhismaha Terminal la dhameeyey sanadkii 2008dii xiligii ay joogtay xukuumadii uu Madaxweynaha ka ahaa Puntland Gen.Cadde Musse, waxaana dhismaha Terminala uu si rasmi ah u hawlgalay markii maamulka uu la wareegay Madaxweynaha hada xilka haya ee Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Madaxweynaha Puntland oo Terminalka Bosaso xariga ka jarey Doorashadiisa bilo ka dib
Tan iyo xiligaasi ayey dowlada Puntland sheegaysay in la dhameystiri doono wadada Laamiga ah ee Runwayga balse arrimahan waxay noqdeen kuwaan lagu guuleysan.
Waxaana xusid muddan in mas’uuliyiintan maanta shirka jaraa’iid ku qabtay Airporka Bosaso ay sheegeen inay doonayaan Qurbo joogta inay ka qeyb qaataan dhismaha oo taburucaadka soo diraan.
Taasi waxaa dhinac socotay in tan iyo Sanadkii 2008 ee la bilaabay dhameystirka Terminalka Airporka Bosaaso in dakhliga Dekkada Puntland ee Bosaaso 5% bilkasta looga jaro dhismaha RUNWAY-GA Airporka Bosaaso, canshuurtaasi oo illaa iyo hada la qaado iyadoo lagu jiro dhamaadka sanadka 2012ka.
Canshuurtaasi loo gooyo sanad walba Airporka Bosaso ayaan la aqoon illaa iyo hada halka ay ku baxdo iyo cida ka mas’uul ah. Canshuurtaasi la qaadayey 4dii sano ee lasoo dhaafay, ayaan la aqoon sababaha loogu dhisi waayey Runwayga Airporka.
Terminalka Airport Bosaso waxa uu ka mid yahay kuwa ugu waaweyn dalka Soomaaliya
Mas’uuliyiinta maanta shirka jaraa’iid ku qabtay Airporka Bosaso oo ay ku jiraan Guddoomiyaha Gobalka Bari, Duqa Degmada Bosaso iyo Mas’uuliyiinta Wasaarada Garoomada iyo duulista hawada ayaan wax sharaxaada ah ka bixin qodobada soo socda:
1- Wakhtiga Dhismaha Runwayga uu bilaabmi doono hadii maanta la dhagax dhigay
2- Shirkada Dhisi doonta Runwayga ama Laamiga Airporka Bosaso
3- Dhaqaalaha ku bixi doona inta uu la egyahay iyo waxa ay dowlada hada gacanta ku heyso
4- Xiliga lasoo gaba gabeyn doono dhismaha Airporka Runwaygiisa.
Arrintan ayey dad badan u fasirteen mid dowlada ay ku koobtay hadal balse aan weli laga heyn ficil iyo waxqabad la taaban karo. Waxaa taasi u dheer jidka ka yimaada Airporka Bosaso ee soo gala Magaalada ayaa kamid ah goobaha Bosaso marar badan la dhagax dhigay Wado laami ah balse illaa iyo hada aan wax laami ah la saarin.
Waxaa horey u jirtay xiligii ay joogtay Dowladii Cadde Musse in Puntland ay yimaadeen Injineero ka socdo Shirkad laga leeyahyay dalka Talyaaniga oo la sheegay inay dhisayaan Airporka Runwaygiisa, balse qandaraaskaasi ayaa burburay, ayadoo xiligii ay Xukuumada Cabdiraxmaan Faroole hawsha la wareegtay ay gebi ahaan joogsaday hawlihii mashruuca Airporka Bosaso.
Madaxweynaha Dowlada Puntland Mudane Cabdiraxman Farole ayaa marar uu booqasho ku tagay dalalkaa Kuwait iyo Turkiga, waxyaabihii uu wadamadaasi ka codsaday waxaa kamid ahaa in la dhiso Airporada Puntland ee Bosaso, Garowe iyo Gaalkayo.
Dowlada Puntland ayaa dhankeeda ku adkaysatay in si siman loo wada dhiso Sadexda Airporta arrimahaasi oo la sheegay inay qeyb ka noqotay caqabadihii ka horyimid dhameystirka Airporka Bosaso oo asagu hadda Runwayga kaliya u dhiman yahay, Mid kamid ah ganacsatada u waa weyn Bosaso oo aan wax ka weydiiney arintan ayaa yiri “…Haddii adiga oo heli kara wax yar aad ku xirto in aad wax weyn hesho waxaa dhici karta in aad weydo wixii yaraa kii weynaana aadan helin Garoonka Bosasona garoomo kale in la helo ayuu u dabran yahay…”
Xiligan ayaa waxaa ka jirta deegaanada Puntland caqabad weyn oo ah dhanka Duulimaadka waxaana si weyn hoos ugu dhacay diyaaradihii imaan jiray Airporka Bosaso, ayadoo inta badan shirkada duulimaadka ay diyaaradahooda ka yimaada caalamka sida Dubai iyo Nairobi u wareejiyeen Airporka magaalada Berbera iyo Airporka Adan Cade ee magaalada Muqdisho.
Ayadoo kadib halkaasi kasoo qaadaan diyaarado yar yar oo ah nooca Antanofka oo asbuucii hal mar duulimaadka ka sameeya gudaha dalka. Waxaana dhacda in marar badan ay diyaaradahaasi qaadi karin cadadka rakaabka oo inta badan ka badan cadadka halmar ay diyaaru u qaadi karto Airporada gudaha Puntand ee Bosaso iyo Gaalkacyo.
Arrintan ayaa caqabad iyo dhibaato weyn ku noqotay shacabka iyo qurba joogta soo booqda Puntland oo ay khasab ku noqoto inay Tagaasi kasoo qaataan magaalada Berbera oo ah wado dheer oo rafaad badan.
Mas’uuliyiinta dowlada oo uu Madaxweynaha kamid yahay ayaa ayagu duulimaadkooda adeegsada diyaarado gaar ah oo yaryar oo kusoo dega Airporka Garowe, arrintan oo ah mid aysan awood u helin karin shacabka Puntland oo ku khasbanaaday ama inay soo maraan Airporada Muqdisho iyo Berbera halkaasna kadib diyaarad yar uga soo qaado Bosaaso iyo Gaalkacyo.